Isagana iyo kuwii ku caashaqi jiray ciyaarta waa users oo mar walba doonayaan inay muujiyaan awoodiisa dadka kale iyo sabab la mid ah waxaa sidoo kale in la xusay in user wuxuu hubinayaa in in ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka kulanka tahay duubo la soo bixi oo ku rakiban yahay si loo hubiyo in aan kaliya daqiiqad kasta waxaa la qabtay laakiin user sidoo kale uu helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira ka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in dib u eegista ay dadka kale ayaa sidoo kale la tixgeliyaa marka barnaamijka la soo bixi oo iibsaday. In tutorial this saamiga guud ee barnaamijka in qoran yihiin waa kuwa ay yihiin in la bixiyaa sida technology duubo ciyaarta waa gaar ah oo halkan ma aha lacag la'aan ah oo dhan.
Ka dib waxaa liiska 10-barnaamijyada sare oo loo isticmaali karo si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo ciyaarta iyo xitaa wareegtay screen waxaa lagu qabtay oo aan wax arrintan iyo dhibaato.
Waxaa ugu fiican oo ugu sareeya barnaamijka liiska taas oo ka dhigaysa hubiyo in dhaqdhaqaaq kasta oo ka mid ah dulqabo iyo sidoo kale in qofka la qabtay iyada oo aan wax qalad ah. Xirfad barnaamijka lagu xukumi karaa xaqiiqada ah in warka casriga caan ah oo internetka farsamada siiyey Gold Award barnaamijkan sidii loo horumariyo si loo hubiyo in isagana waxaa lagu marnaba laga qaxay marka ay timaado eego horumarka tiknoolijiyada iyo la xiriira ee horumar ah hab ugu fiican. Liiska qaababka in lagu gundhig waa mid aad u dheer sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in URL la booqday wixii macluumaad ah ee dheeraad ah ee arrintan la xiriira si user sidoo kale uu helo heshiiska ugu fiican.
Sidoo kale waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican oo loo hubiyo in ugu fiican waxaa loogu talo galay isagana ka si ay u wada cafiyo oo mid ka mid ah ad gobolka ugu fiican ee rikoorrada barnaamijka fanka noqday sidoo. Marka laga reebo duubo ciyaarta barnaamijka ayaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in goobaha Qabsashada screen iyo video duubo ugu wanaagsan waxaa sidoo kale in dadka isticmaala ay sidii loo dhisay gacmaha ugu xirfadeed ee warshadaha si loo hubiyo in isagana waxaa lagu hayaa hal madal ay.
3. Wonder Share Video taariikhqorihii
Waa taariikhqorihii ahaa oo keliya in la Timaadda convertor video ah si isagana ka diiwaan galin kartaa lana geliyo ama la wadaagto video ah sida ay u baahan yihiin oo waxay jeclaan si loo hubiyo in meel lagu kaydiyo yar iyo sidoo kale khayraadka nidaamka guud ahaan waxaa loo wada baabbi'in fudayd iyo qanacsanaanta. Waxaa sidoo kale in la xuso in liisanka ee barnaamijka waa in la soo iibsatay hal mar oo kaliya iyo wararka ay yihiin lacag la'aan u ah nolosha oo waxaa ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka ku jira liiska taas oo ka dhigaysa. Wondershare Video Convertor la iman taariikhqorihii Wondershare Video taas oo macnaheedu yahay in rakibidda convertor si toos ah rakibtay taariikhqorihii Video ah. Wondershare Video convertor laftiisa kama dambaysta ah waa aalad awood taas loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay marka ay timaado tafatirka, duuban, diinta iyo liiska ku dhaco. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in video la live in TV-ga iyadoo la kaashanayo xarunta warbaahinta oo uu soo gundhig huleeshay. Waxa kale oo ay taageertaa HD iyo technology 4K. Jidka si taariikhqorihii video waa Menu> video taariikhqorihii sida kaaga muuqata sawirka hoose.
Cidida 4. Play
Haddii user a doonayo in la hubiyo in taariikhqorihii ugu fiican ciyaarta in sidoo kale uu awood u leeyahay in la hubiyo in audio ee qofka ayaa waxaa sidoo kale la duubay waa in la soo iibsatay markaas cidida Play waa ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka tahay in uu yahay in ay soo bixi arrintan la xiriira si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada farshaxanka ee la xiriirta in ay ciyaarta qoro cod.
Inaad ka faa'iideysato ee lacagta iyo sidoo kale khayraadka nidaamka Waxa lagu talinayaa in la hubiyo in user waa in dejisan iyo rakibi barnaamijka waxaa la soo iibsatay ka dib. Waxaa ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo heshiis ugu fiican oo aan wax arrintan oo dhibaato iyo arrin guud ee duubo ciyaarta ayaa waxaa sidoo kale sii raagayaan in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah.
Iyada oo ugu wanaagsan ee farsamooyinka Qabsashada ciyaarta iyo arrin guud oo uu soo raagayaan arrintan la xiriira user waa inay hubiyaan in barnaamijka la soo iibsatay oo lagala soo bixi oo aan wax arrintan oo dhibaato iyo user waa in sidoo kale la hubiyo in hagaha waxbarashada waxaa sidoo kale akhri si aad u hesho ugu fiican oo gobolka ka mid ah qaababka tahay in lagu gundhig gudahood barnaamijka ka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in aad u hesho sida ugu fiican ee ka mid ah barnaamijka ay marka hore tijaabiyo.
7. Xsplit Game doontid
Taariikhqorihii Kulankaan waa inuu xaqiijiyo in user helo ugu wanaagsan ee reer barnaamijyada in la sameeyo si ay u sameeyaan ay cabsi badan iyo user saaxiibtinimo interface. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira waxaa sidoo kale codsaday in la hubiyo in dhammaan functionalities waxaa si buuxda u sahamiyey hor inta uusan barnaamijka waxaa soo iibsatay oo ka mid ah dib u eegista guud ahaan in dadka isticmaala ku siiyey iyo sidoo kale ratings in barnaamijka uu leeyahay helay.
Qabashada 8. WM
Barnaamijkan qabsatay ciyaarta hab taas oo ka dhigaysa hubiyo in ciyaarta live iyo arrin guud oo uu soo xiriira waxaa lagu dhiggay sifooyinka wanaagsan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira waa in la hubiyo in ciyaarta waxa ay ku diiwaan isticmaalaya xidhiidh ah oo internet xawaarihiisu sarreeyo si duubo la sameeyo hab ugu wanaagsan ee la sameeyo.
Qaabka guud iyo functionalities in lagu gundhig gudahood barnaamijka waa kuwa in ay yihiin sahlan oo ay raacaan iyo waxaa sidoo kale la hubiyo in natiijada ugu wanaagsan ee la siiyo user ee arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in ka hor inta iibka waxaa laga dhigay wax fikrad guud oo la xidhiidha barnaamijka waxaa kaloo uu sahamiyey.
10. ZD taariikhqorihii screen jilicsan
Shirkadda ayaa caan ku ah sameynta waxyaabaha ay tahay in ay yihiin gobolka of farshaxanka iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in barnaamijka ugu wanaagsan ee la soo bixi qaab ka mid ah in la hoos geliyey sameeyo. Waa barnaamij taas oo ka dhigaysa hubiyo in gamer helo daqiiqad kasta ee ciyaarta diiwaan habka ugu fiican.
Top talinayo Android Games Room
> Resource > Game > Top 10 Game duubo software 2015 u pc